एलेक्साको शीर्ष १०,००,००० साइटहरूमा ब्रेक गर्दै Martech Zone
एलेक्साको शीर्ष १०,००० साइटहरूमा ब्रेक गर्दै
यसले छ महिना कडा परिश्रम गर्यो, तर आज मैले जाँच गरें alexa र १०,००,००० अंक (month महिनाको औसत) लाई तोडेको छ।
यदि मैले अनुमान लगाएँ भने, म भन्न सक्दछु गत 10 महिनाको लागि मेरो ब्लगमा प्रति हप्ता १० देखि २० घण्टा मलाई त्यहाँ पुगेको छ। मँ नयाँ वर्ष अगाडि यसलाई नailed्ग पार्ने आशा गर्दै थिएँ, तर २ दिन अतिरिक्त भएपछि म ठीक छु।
म किन यो साझा गर्दैछु? अरू केहि चीजको रूपमा, मलाई लाग्छ यो आफैंको लागि लक्ष्यहरू राख्नु राम्रो हो। एलेक्सा भनेको मसँग 'इन्टर्नेट रेन्कि' 'भएको सबैभन्दा नजिकको चीज हो त्यसैले यसले मलाई मेरो साइट अरू सबैको बिरूद्ध कसरी गर्दैछ भनेर बताउँछ। टेक्नोराटी प्रदान गर्दछ कसरी मेरो ब्लग अरूलाई बिरूद्ध गर्दैछ। म १२,००० भन्दा मुनिको छु र वर्षको अन्त्य सम्ममा शीर्ष 12,000,००० ब्लगहरू बनाउने आशा गर्दैछु।
म अरु के गर्दै छु? मैले एक जोडी पुन: डिजाइन गरें, केहि खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन, केहि मेरो टेम्प्लेटको ट्वीक गर्दै, धेरै अन्य ब्लगमा टिप्पणी गर्ने ब्लग, धेरै ट्र्याकब्याक ... तर प्राय जसो मैले मेरो ब्लग के हुनुपर्दछ भन्ने मेरो दृष्टिकोणमा धेरै सत्य रहन प्रयास गरें। गर्दै म मार्केटिंग र स्वचालन को सम्बन्ध मा स्पष्टसँग जानकारी बाँड्न चाहान्छु।
मेरो शीर्षकहरू व्यापक रूपले फरक हुन्छ, कहिलेकाँही व्यक्तिगत जानकारीको केही बाउट्स थप्न (ताकि तपाईं मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ) प्रोग्रामिंगमा शीर्षकहरू (प्रत्येक आधुनिक मार्केटरको जीवनको एक हिस्सा - प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा), विज्ञापन र कसरी ग्राहकको ध्यानको परिदृश्य परिवर्तन हुँदैछ, ब्लगिंग र यसले वास्तवमा मार्केटिंगमा कसरी मद्दत गर्दछ, र निश्चित रूपमा मेरो आवधिक rans।
यो राम्रोसँग कार्य गरेको जस्तो देखिन्छ, र मलाई खुशी छ कि तपाईंले यसको आनन्द लिइरहनुभएको छ। कृपया मलाई थाहा दिनुहोस् यदि त्यहाँ अन्य शीर्षकहरू छन् जुन तपाईं मलाई कभर हेर्न चाहनुहुन्छ। र अवश्य पनि, म तपाईंलाई मार्केटिंग टेक्नोलोजीहरूको सन्दर्भमा सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको बारेमा सीधा कुरा गर्न जारी राख्छु!
SQL इंजेक्शन र क्रस-साइट स्क्रिप्टि toको लागि शुरुआतका गाईडहरू
WordPress: # 1 प्लगइन प्रत्येक साइट हुनु पर्छ
जनवरी १, २०१3१२::2007 अपराह्न
ठ्याक्कै, शन ... अलेक्सा तपाईलाई लामो समय सम्म कुर्नु भयो, अधिक सटीक हुने देखिन्छ। मलाई लाग्छ कि यो किनभने एलेक्साले पहुँचको अनुमान गर्न एक 'अनियमित' नमूना प्रयोग गर्दछ। त्यसैले - समयको साथ, यो अधिक सहि हुन जान्छ। त्यो एउटा कारण हो जुन मैले दीर्घकालीन र-महिना बढी ध्यान दिन्छु मेरो लक्ष्य 'आज' भन्दा बरु हो। तपाईले आफ्नो साइटमा हेरेजस्तै म दैनिकमा एकदम थोरै उकासेको छु, तर समयको साथमा यसले के महत्व राख्छ।
"वाह" र "उह ओह" निश्चित रूपमा म पछि के हुँ। म ब्लगमा कडा मेहनत गर्दछु त्यसैले अन्तिम कुरा भनेको म हेर्न चाहन्छु कि म ग्राहकहरूलाई प्राप्त गर्नु र ग्राहकहरू राख्नुको सट्टा मान्छेहरू राख्दैछु। यो केवल मेरो प्रदर्शन को एक उपाय हो।
यो पनि एक उत्कृष्ट सूचक हो किनकि म उनीहरूको ब्लगमा अन्य धेरै ग्राहकहरूको सल्लाह लिन्छु। यदि म आफ्नै पहुँच बढ्न सक्दिन, मलाई पक्का छैन कि तिनीहरूले मेरो कुरा सुन्नु पर्छ! यो धेरै एसईओ विशेषज्ञलाई काममा लिने जस्तो छ जुन शीर्ष १० मा छैन ... चिन्ता नलिनुहोस्!
जनवरी 4, 2007 मा 6: 06 एएम
बधाई डग! महान पोस्ट साथी राख्नुहोस् 🙂
जनवरी १, २०१6१२::2007 अपराह्न
बधाई डग! तपाईले देखाईएको छ कि कडा परिश्रमले भुक्तानी गर्दछ। लडाई स्पामको साथ सबै भन्दा राम्रो, हामीलाई नियो चाहिन्छ blog ब्लगको पुनरुद्धार र तपाईंको जानकारीपूर्ण पोष्टहरूको प्रतीक्षा गर्दै।
जनवरी १, २०१ 10 १२::2007 अपराह्न
बधाई छ! मेरो अफिसमा टोकन डरलाग्दो भएकोले मैले SEOको राम्रो काम गरेको छु र मेरो ब्लगमा ध्यान दिन र पढ्नको लागि प्रयास गरिरहेछु। हामी एलेक्सामा पनि माथि गइरहेका छौं तर १०० के--महिनाको चिन्ह तोड्न सकेनौं। त्यसैले मलाई थाहा छ यो कत्ति गाह्रो हुन सक्छ।
एक राम्रो ब्लग को लागी धन्यवाद, यसलाई राख्नुहोस्।
क्रिस किफ MSCO मा
"तपाइँको मार्केटिU समस्याहरू" मार्क स्टीभन्सका लेखक द्वारा लिखित
जनवरी 11, 2007 मा 8: 52 एएम
जनवरी 13, 2007 मा 1: 20 एएम
जानकारी को लागी धन्यबाद। राम्रो सफा साइट।
मार्स 19, 2007 मा 10: 46 एएम
मलाई लाग्छ एलेक्सा परिणामहरू अधिक सटीक हुन्छ साइट / यातायात ठूलो। सानो स्तरमा व्यक्तिहरूले उपकरण बार स्थापित गर्न र एक अर्का साइटहरूको भ्रमण गर्न एक समूहको आधारमा झूटा परिणामहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्दछन् (मैले यी साइटहरूको एक जोडी भर्खर पप्पिंग गर्दै गरेको देखें)
व्यक्तिगत रूपमा, म साइट सफलता मापन गर्दछ यो उपयोगी छ र प्रतिक्रिया बाट। मेरो लागि त्यो प्रमाणित गर्ने तरिका भनेको मेरो सर्वरको वेब तथ्या .्कलाई हेरेर र बढेको ट्राफिकको स्थिर प्रवृत्ति हेरेर हो।
अगस्ट 9, 2008 मा 9: 42 AM
यदि तपाईं अलेक्सालाई आफ्नो यातायातको सटीक रेकर्ड दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईं विजेट स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको वेबसाइटमा प्रत्येक पटक भ्रमण गरिएमा अलेक्सालाई जान्न दिनेछ - केवल जब उपकरणपट्टीको साथ कोही जान्छन्।
मार्क्स 30, 2009 मा 12: 15 PM
बधाई छ मानिस! हुनसक्छ तपाईले मेरो सुझावलाई शीर्ष १००k मा पनि प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ!
मार्क्स 30, 2009 मा 3: 12 PM
कडा परिश्रम, दैनिक ब्लगिंग, र गति = सफलता। म अब शीर्ष k०k मा छु।
जुन 30, 2009 मा 10: 22 PM
यो अब जून ,०, २०० and हो र मैले भर्खर तपाईंको जनवरी 30rd तेस्रो पोस्टमा ठक्कर खाएको छु ... तपाईंको उपलब्धिमा ढिलाइ प्रदान गर्नुहोस्। Months महिनामा १,००,००० भन्दा मुनिको यो एक उपलब्धी हो।
हामीले नोभेम्बर २०० in मा हामीले हाम्रो ल्याट्स वेबसाइट ल्याएका थियौं र अन्ततः हामीले १ मिलियन मुनि हाम्रो रैंकिंग पाएका छौं। हामी प्रोजेक्ट गर्दैछौं कि हामी अन्तमा १,००,००० मुनि हुनेछौं।
ठीक छ, राम्रो काम जारी राख्नुहोस् ...
नमस्ते डग, अहिल्यै मेरो एलेक्सा कतै १० 105k-११०k को बीचमा छ, म के गर्न सक्छु यस भन्दा माथि हुन र १००k भन्दा कम। राम्रो साइट र अझ राम्रो जानकारी। राम्रो काम जारी राख्नुहोस्, धन्यवाद!
जुन 7, 2013 मा 1: 19 PM
फेब्रुअरी १,, २०११ 3:१:2015 अपराह्न
के तपाइँ अझै पनी एक साइट कती राम्रो गरिरहेको छ निर्धारण मा टेक्नोराटी रेटिंग लाई कदर गर्नुहुन्छ?
होईन, इमान्दारीताका साथ मैले धेरै समय सम्म राखेको छैन। मलाई लाग्छ कि सामाजिक प्रभावले आज कल बोर्डभरि धेरै बढी प्रभाव पारिरहेको छ।